Kan walitti-bu’insi keessatti uumamee fi miidhaan keessatti dhaqqabe - Bulchiinsa Naannoo Kibbaa keessatti kanneen argaman - hoogganoonni aanaalee fi godinaalee itti gaafatama fudhachuudhaan akka fedha isaaniitiin taayitaa isaanii gad-lakkisan, muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa – Dr. Abiyyi Ahimed dubbachuu isaanii, Itti-gaafatamaan Waajira Muummicha-ministaraa – Obbo Fitsum Araggaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiran.
Naannooleen walitti-bu’insoonni kun itti geggeessaman, naannoo Hawaasaa, Walaayittaa Sooddoo, Wal-qixxee, Naannoo Guraagee fi Qabanaa tahuu ka dubbatan – Obbo Fitsum Areggaa, walitti-bu’insa kanaaf itti-gaafatamoo dha, hoogganoota jedhaman ilaalchisuun akkana jedhan.
“Walitti-bu’insa sana kanneen hammeessanis tahe kanneen itti gaafatama fuddhatanii qabbaneessuu dhiisan – itti-gaafatamtoonni aanaalee tahe godinaalee naannoo sanatti qajeelfama kennaa turan badii kanaaf itti gaafatama fudhatanii taayitaa isaanii akka gad-lakkisan – muummichi-ministaraa gaaffii dhiheessan. Akkasumas mootummaan naannoo sirna jiru hordofee gamaaggamuudhaan, kanneen fudha isaaniin tarkaanfii kana hin fudhanne irratti tarkaanfii maluuf akka fudhatan dabalatee waan taheef, hawaasichis dhimma kana akka hordofu,” jedhan – itti-gaafatmaan waajjira muummicha-ministaraa – Obbo Fistsum Areggaa.
Keessumaa kanneen miidhaan irra gahe akka deebisamanii gad-dhaabaman, warri miidhaan na irra gahe – jedhan akka hirphamanii fi gara jireenya isaanii duraatti akka deebisaman hubachiisuu isaaniis beeksisanii jiran.